Nidaamka Dareemaha Dufanka Nidaamka Warbixinta BILAASHKA PDF
Home » eBook » Nidaamka Dareemaha Dufanka Nidaamka Warbixinta BILAASHKA
Waxaanu kuu soo bandhigeynaa warbixinta pdf soo baxa oo bilaash ah oo loogu talagalay Nidaamka Dareemaha Fataha ee Kyle Cooper
Boggan TUSMADA 46 PDF Warbixinta hordhaca ah waa "qayb yar" ee Nidaamka Dareemaha Fataha, si aad u ogaato XAQIIQOOYINKA iyo GARASHADA waxa aad heli doontid haddii aad go'aansato inaad ka iibsato qorshahan miisaanka cusub ee cusub.
Ka soo warbixi warbixinta barmaamijka bilaashka ah http://www.fitnessrebates.com/wp-content/uploads/2018/08/FatDecimatorSystemFreeReport.pdf
Warbixinta Miisaanka Dheellitirka ee BILAASHA ah ayaa laga heli karaa qaabka PDF waxaana laga daawan karaa casriga, kombiyuutarka, ama kiniinka. Waxaad riixi kartaa feylka si aad ugu keydiso kumbuyuutarkaaga.
Ku saabsan Nidaamka Miisaanka Miisaanka Miisaaniyadda:
Nidaamka Dareemidda Fatifka waa mashaariic culus miisaan cusub oo kaa caawinaya in aad nadiifiso jirkaaga oo aad daadiso dufanka jirka aan la rabin ee haboon oo waxtar leh. Qorshaha Dufanka Dufanka leh ee ku dhawaad ​​qof kasta oo lumiyo 21 lbs toddobaadyo keliya!
Iyadoo ku saleysan 10 sano oo cilmi-baaris ah oo ku saabsan daraasadaha caafimaadka ee 500 iyo sidoo kale ku dhowaad 3 sanado dhab ah oo tijaabo ah, qorshahan cusub ee miisaanka culus ee Kyle Cooper ayaa leh natiijooyinka iyo sayniska si loo soo celiyo.
Kyle Cooper, oo ah abuuraha Nidaamka Dareemka Fatnikka, waa marin hore u shaqeynayay iyo tababaraha shakhsiga ah, Kyle wuxuu tababartay askar millatari si uu u helo qaabka ugu wanaagsan ee suurtogalka ah ee sanadihii 10 ee la soo dhaafay.